Atụmatụ B2B gị kwesịrị ịgụnye Ecommerce | Martech Zone
Imaara na anyi etinyego ihe a ụlọ ahịa ọrụ na Martech? Anyị anaghị akwalite ya otu ụda (mana) ka anyị na-aga n'ihu, mana anyị na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ ọnụahịa ọnụahịa ma achọghị ịrụ ọrụ na ndị otu ahịa ka ha debanye aha maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji wuo akụkụ a nke saịtị anyị ma anyị na-aga n'ihu ịgbakwunye ngwaahịa na ọrụ - site na nyocha na infographics.
Dika eCommerce na omumu ihe omnichannel riri elu na B2C, ha gha adi nma na ahia ndi ahia. Ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa na ndị na-azụ ahịa B2B bụ ndị na-azụ ahịa na ndụ nke onwe ha, atụmanya maka ihe ọmụma, mfe ịnyagharịa nyiwe ịzụta dijitalụ na-emetụta dị ka ịzụta ụgbọ mmiri ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dịka ọ na-enye iwu ịkpụ akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ.
Anyị buru amụma azụmaahịa ọ bụla ga-abụ azụmaahịa eCommerceMana anyi abughi soso! Nnukwu ihe mmekọrịta enwere mmekọrịta na ndị ọkachamara dijitalụ na eCommerce nke dị elu na nnukwu ụlọ ọrụ B2B iji ghọta mmụọ ntụgharị maka ịzụrụ na ịntanetị
Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa B2B ndị na-azụ ihe n'ịntanetị sitere na 57% na 2013 ruo 68% na 2014.
86% nke ụlọ ọrụ B2B na-enyezi nhọrọ ịzụrụ n'ịntanetị.
Naanị 50% nke ụlọ ọrụ B2B na-enweta ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ iri nke ego ha nwetara site na ịntanetị.
Otu igodo na nke a anyị hụrụ bụ na ndị ọbịa B2B achọghị ịkwụ ụgwọ n'ihu iji kaadị kredit maka ọrụ ndị a dị egwu. Nke ahụ abụghị nsogbu ugbu a na anyị enyela ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ, gụnyere ịgba ụgwọ.
Tags: Accentureb2bazụmahịa b2binfographicomnichannelonline erena-ere ọrụ na ntanetị
Ihe na-esi isi na ngwa mgbakwunye WordPress & Nyocha